**ရွေမြို့တော်..ချက်ရွှန်းသို့..ပေးစာ..** - ရွှေမြို့တော်
သြဂုတ်လ 20, 2012 9:45amတွင်ချစ်ဦးမောင် မှတင်ပြသောဘလော့ပို့(စ်)ဖြစ်ပါသည်
မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ.... မိတ်ဆွေ...
ကျွန်တော် တစ်ခါမှဒီလိုစာမျိုးမရေးဘူးပါ... ဒါပေမယ့်အခုရေးနေရတယ်လေ... ဘာကြောင့်လည်း.....
မနေ့က ကျွန်တော် ချက်ရွန်းမှာ စကားလေးနည်းနည်း...၀င်ပြောမိပါတယ်.... တစ်ယောက်သော..သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ချက်ရွှန်းမှာ
ကော်ပီတွေလုပ်တာများနေပါတယ်.... ကျွန်တော်ကလည်းစေတနာနဲ့သူငယ်ချင်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာလို့ ပြောမိပါတယ်...
တချို့မန်ဘာတွေလည်းစကားပြောရတာ အဆင်မပြောဖြစ်ကုန်မှာဆိုးလို့ပါ ။
အဲ့တော့ ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် ချစ်ဦးမောင်ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂါတဲ့ မင်းဘလော့ဂါ ဘလော့ဂါနေရာနေတဲ့..
နေရာတကာ လူတွင်ကျယ်မလုပ်နဲ့တဲ့ ဒါချက်ရွှန်းက ကော်ပီလုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ကိုပြောသွားတာ...
ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ.... ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ သူလည်းအဘမ်းမခံရအောင် ချက်ရွှန်းထဲက တချို့
ကျွန်တော်တို့လိုမန်ာဘာတွေလည်း စကားပြောတာ အဆင်ပြေရအောင်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့သူ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောမိတာကို..
ကျွန်တော်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး... ရိုးရိုးမန်ဘာတစ်ယောက်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်ဆီမှာ ဆိုဒ်ပေါင်းဆုံရှိပါတယ်... အဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ ချက်ရွှန်းကိုကျွန်တော်မသုံးပါဘူး..... ရွေမြို့တော်ဆိုဒ်မှာ..
ရှိနေတာအချိန်ပြည့်နီးပါ ဒီရွေမြို့တော်ဆိုဒ်ရဲ့ချက်ရွှန်းကို ကျွန်တော်အွန်လိုင်းထိုင်ချိန်တိုင်း ၀င်နေပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောလိုက် နောက်လိုက်နဲ့ပါ ရန်ဖြစ်ရင်တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်ဝင်ဖြေပေးဘူးပါတယ်.... ကော်ပီလုပ်ရင်
တခါတလေတားဘူးပါတယ်...မနေ့က အဲ့သူငယ်ချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..
““ဟေ့ရောင် မင်းနေရာတကာ လူတွင်ကျယ်မလုပ်နဲ့တဲ့...””
ထားပါတော့လေဗျာ ချက်ရွှန်းထဲက ညီအကို မောင်နှမတွေ လိုခင်မင်တယ် စတယ်နောက်တယ် ပြဿနာဖြေပေးတယ်..
ဒါကိုလူတွင်ကျယ် လုပ်တယ်လို့ပြောတယ် ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်မှားသွားတာပါ နောက်ဆိုအဲ့လိုလည်း ၀င်မဖြေပေးတောပါဘူး
၀င်မပြောတော့ပါဘူး ချက်ရွှန်းထဲက ညီအကိုမောင်နှမတွေကို လည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်... ကျွန်တော် နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်...
ချက်ရွှန်းထဲက ညီအကိုမောင်နှမတွေကို လည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်... ကျွန်တော် နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်...
(ချစ်ဦးမောင်)..... ကြည်သူဦးရေ: 253
အမျိုးအစား: အသိပေး ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင် 12 ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
2:25pmမှာဇွန်လ 23, 2013 တွင် ♫♫☆ မော်လမြိုင်သူ (ယမင်းဖြူ) ☆♫♫ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် တနေ့ ကိုယ့်စေတနာ ကိုသူနာလည်လာမှာပါ။ ရွှေမြိုတော် ကိုတော့ နုတ်ဆက်လိုက်ပါနဲ့နော်။ 10:03amမှာဇွန်လ 1, 2013 တွင် thit sar moe မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ခွင်လွှတ်ခြင်းဆိုတာအောင်မြင်ရဲ့လှေခါးထစ်တွေပါ......သူငယ်ချင်း....အပင်မြင့်လို့လေတိုက်ခံရတယ်လို့ပဲခံယူလိုက်ပါ 12:54pmမှာသြဂုတ်လ 22, 2012 တွင် cherry မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ဘာကိုကော်ပီ လုပ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းတော့ နားမလည်ပေမယ့် အစ်ကိုရေးထားတာကိုကြိုက်တယ်
5:09pmမှာသြဂုတ်လ 21, 2012 တွင် ချစ်ဦးမောင် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ဟုတ် ကျွန်တော် အပြီးအပိုင် မထွက် တော့ပါဘူး..
ကျွန်တော် ချက်ရွှန်းကိုပဲ နှုတ်ဆက်တာပါ.. ရွေမြို့တော်ကို နှုတ်ဆက် မသွားပါဘူး..
အခုလို သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့စကားသံလေးတွေ ကြားရတာ ကျွန်တော် ပျော်ရွင်ကျေနပ်မိပါတယ်..
ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ ရွေမြို့တော်မှာ ဆက်ှိနေမှာပါ...လို့အကြောင်းပြန်ပါတယ်....
(ချစ်ဦးမောင်)..သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ခင်မင်လေးစားချစ်ခင်လျှက်... 10:31amမှာသြဂုတ်လ 21, 2012 တွင် မောင်ခင်မင်(ကျွန်းချောင်း) မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ခင်ဗျားတို့ မှားနေကြပြီခင်ဗျ....
ဆြာ ... ချစ်ဦးမောင်နှုတ်ဆက်တာက ... ချက်ရွမ်း(မ်) ကိုခင်ဗျ ....
ဆြာ .. က ကဗျာသမား ခင်ဗျ... ထို့ ကြောင့်ကျွန်ုပ်သူ့ ရင်ထဲဝင်ဖတ်လို့ ရတယ်ခင်ဗျ ....
ဆြာ ချစ် ... ဟုတ်တယ်မို့ လားဗျ ..... ?
ရွှေမြို့ တော် ကို ... နှုတ်မဆက်ပါဘူးလို့ ပြောပြလိုက်ပါခင်ဗျ .....
မြို့တော်ကိုချစ်တယ် ... မန်ဘာတွေကိုချစ်တယ် ... ကဗျာကိုချစ်တယ် ...
နှလုံးသားက သိမ်မွေ့ ပါတယ်ဗျာ ... ဆြာချစ်ဦးမောင် က ....
ဘယ်ကဗျာ နဲ့... ကဗျာစက်ရုံကို .... သူမပစ်သွားရက်ပါဘူးခင်ဗျ .....
ဟုတ်တယ်မို့ လား ..... ဆြာချစ် ...( စာပြန်ပေးစေချင်ပါသည် )...
4:06amမှာသြဂုတ်လ 21, 2012 တွင် ခရေ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် စိတ်ထဲမထည့်ပါနဲ့ ကွယ် ပညာရှိဆိုတာ အရာရာကို သီးခံတတ်တယ်တဲ့. မောင်လေးက ပညာရှိလို ပဲတွေးပြီး ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ.. ဒီလောက် စိတ်ချမ်းမြေ့ ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရွှေမြို့ တော် ထဲကနေ တော့ မနှုတ်ထွက်ပါနဲ့ ကွယ်.. သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါ့မယ်.. 3:52amမှာသြဂုတ်လ 21, 2012 တွင် khaingwarmoe မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အကိုချစ်ဦးမောင်ရေ ချက်ရွန်းကိုဘဲ နုတ်ဆက်တာနော် မြို.တော်ကြီးကိုတော. မနုတ်ဆက်ပါနဲ.ရှင်...လူတွေအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေလေ ..အိမ်တလုံးထဲမှာ အတူနေကြတဲ. မောင်နှမတွေလိုပေါ....အငယ်တွေနားထောင်တာမထောင်တာ သူ.တို.ကိတ်စ ကိုယ်က အကြီးဆိုတော. နားမထောင်လည်း အမုန်းခံပြီးဆုံးမနေကြရတာလေ...ကိုယ်တာဝန်ကိုယ်ကျေအောင်ယူလိုက်တာပါ....အမှားပါယင်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင် 3:47amမှာသြဂုတ်လ 21, 2012 တွင် kayah မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် don't wanna say goodbye to your friend. don't depart in shwemyotaw.. 2:23amမှာသြဂုတ်လ 21, 2012 တွင် ညိုလင်းမောင် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကိုချစ်ဦးမောင်ရေ
ခွင့်လွတ်လိုက်ပဲ ကျွန်တော် ထပ်ပြီး တိုက်တွန်းပါရစေဗျာ 1:42amမှာသြဂုတ်လ 21, 2012 တွင် ♫♫★အမုန်း မူပိုင်♫♫★ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် သယ်ချင်းရေ မင်းအတွက်စိတ်မကောင်ပါဘူးကွာ....သူငယ်ချင်းအများကြီးနဲ့ ခွဲရမှာထက် အဲလိုကောင်တယောက်မုန်တာ မုန်စမ်းပါစေကွာ..ကိုယ်ဘက်ကမှန်နေတာပဲ ကိုကမဟုတ်တာလုပ်တာမှ မဟုတ်ပဲ ရဲရဲသာနေပါ မင်းထွက်သွားရင်တော အကိုတို့ စိတ်မကောင်းခြင်ကြီးစွာဖြစ်မိမှာအမှန်ပဲကွာ.. 1
+웃❤유 ထက်​​ကောင်းကင်​웃❤유+ အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
ပိုးလေး အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်